Ikati e-orenji eyenziwe ngekhadibhodi | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ikati e-Orenji eyenziwe ngekhadibhodi
UAlicia tomero | 18/04/2022 14:25 | Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla zabantwana, Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo
Este ikati encinci umhle nyani. Singenza lo msebenzi wezandla ikhadibhodi kunye neengcezu ezimbalwa zokucoca imibhobho. Ukulandela amanyathelo kuya kuba ngumsebenzi omncinci olula kwaye oqinisekileyo onokuwenza kunye nabancinci endlwini. Lo msebenzi wenziwa nge-silicone eshushu ukuze iziqwenga zayo zibambelele ngokukhawuleza. Ke ngoko, inokuba yingozi kancinci ngenxa yobushushu obuthathayo kwaye itshise iminwe yabantwana. Ukwenza oku, unokutshintsha indawo yeglue efanelekileyo kwi-crafts kwaye ubambe iziqwenga ngento ethile ukuze zifakwe ngokuthe chu. Ukuba uyathandabuza amanyathelo akhe, une ividiyo yokubonisa ukuze ungalahlekelwa zinkcukacha.
1 Izinto endizisebenzisele intshontsho lekati:
Izinto endizisebenzisele intshontsho lekati:
Ikhadibhodi e-Orenji enombala obukhali.
Iqhekeza lekhadibhodi e-orenji ekhaphukhaphu kancinane namhlophe.
Isicwecwe sezicoci zemibhobho eorenji.
Amehlo amabini eplastiki kwimisebenzi yezandla.
I-silicone eshushu kunye nompu wakho, okanye ukusilela, uhlobo oluthile lweglue ekhethekileyo yobugcisa.
Silungiselela ikhadibhodi ye-orange emnyama kwaye ngoncedo lomlawuli sithatha uxande lwe-8 x 21 cm. Siyinqumle kwaye siyibophe ukwenza i-cylinder ebanzi. Sincamathelisa amacala ayo nge-silicone eshushu.
Sibeka ukukhanya orenji cardstock kwi-cylinder kwaye ubale ukuba inkulu kangakanani ukuzoba i ikati umlomo, siya kuyenza simahla. Siyinqumle kwaye siyincamathelise. Kwangokunjalo siza kuzoba isangqa esimhlophe esincinci, Siza kuyisika kwaye siyincamathisele.
Ngoncedo lomakishi omnyama sizoba amehlo kunye namashiya. Siza kupeyinta amabhovu kunye nemigca esecaleni Ziya kuba kwimilo yoonxantathu.
Sikhuphe i umtya omde ukwenza umsila wekati, malunga ne-12cm. Sinqumle isiphelo somsila ukwenzela ukuba ukhonjwe. Ngophawu olumnyama sipeyinta ezinye imigca ebanzi ecaleni komsila, kumacala omabini ekhadibhodi. Sincamathelisa umsila emva komzimba wekati ushiya ukuphumla ngaphambili.
Thatha isicoci sombhobho kwaye usike iziqwenga ezibini yenza iindlebe Siza kubenza bathathe iimilo ezinonxantathu ezimbini kwaye bazincamathelise phezulu nangaphakathi kumbhobho. Thatha amanye amaqhekeza amabini okucoca umbhobho kwaye uwajije yenza iibhola ezimbini Siza kuzincamathela kwindawo engezantsi yekati ukulinganisa imilenze. Kwaye ngolo hlobo siza kuba nalo katana intle.
Ibhokisi enezinto zokudlala zekati
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » Ikati e-Orenji eyenziwe ngekhadibhodi
11 Ubugcisa obunamaphayinaphu oqobo kunye nomnandi
13 Imisebenzi yezandla enebhokisi yematshisi yokuqala